ပြောင်းလဲခြင်း, Contrapositive နှင့်ပြောင်းပြန်ဘာတွေလဲ?
by Courtney တေလာ
conditional statement တွေကိုနေရာတိုင်းပွဲပါစေ။ ": P ပြီးတော့မေး။ အကယ်. " အခြေအနေကတော့ထုတ်ပြန်ချက်များအမှန်ပင်အရေးကြီးလှသည်တခြားနေရာသင်္ချာသို့မဟုတ်မြို့တွင်းကပုံစံတစ်ခုခုသို့ run ဖို့ရှည်လျားယူမထားဘူး။ လညျးအရေးကွီးဘာတွေလဲ, P ၏အနေအထား, မေးနှင့်ကြေညာချက်၏ negation ပြောင်းလဲနေတဲ့ခြင်းဖြင့်မူရင်းခြွင်းချက်ကြေညာချက်နဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ မူရင်းကြေညာချက်နှင့်အတူစတင်ခြင်း, ကျနော်တို့စကားပြောဆိုမှုသည် contrapositive, နှင့်ပြောင်းပြန်အမည်ရှိဖြစ်ကြောင်းအသစ်သုံးမျိုးကိုခြွင်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။
ကျနော်တို့ပြောင်းလဲခြင်း, contrapositive နှင့်ခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ပြောင်းပြန်သတ်မှတ်ခင်မှာကျနော်တို့ negation ၏ခေါင်းစဉ်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သည်ကြေညာချက် ယုတ္တိဗေဒ စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ ကြေညာချက်၏ negation ရိုးရှင်းစွာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏သငျ့လျြောသောစိတျအပိုငျးမှာစကားလုံး "မ" ၏သွင်းပါဝငျသညျ။ ကကြေညာချက်၏အမှန်တရား status ကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်စကားလုံးများ၏ထို့အပြင်ပြု "မ" ။
ဒါဟာဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင် "ဒီ လက်ျာဘက်တြိဂံ equilateral ဖြစ်ပါတယ်" negation "ဒီလက်ျာဘက်တြိဂံ equilateral မဟုတ်ပါဘူး။ " ဖြစ်ပါတယ် "10 တစ်ရပ်ပင်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်" ၏ negation ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ် "10 တစ်ရပ်ပင်အရေအတွက်ကမဟုတ်ပါဘူး။ " ဟုတ်ပါတယ်, ဒီနောက်ဆုံးဥပမာအားဖြင့်, ကျနော်တို့အနေနဲ့ကိန်း၏အဓိပ်ပါယျကိုသုံးပါနှင့်အစားပြောနိုင်ပါတယ် "10 တစ်ရပ်ထူးဆန်းအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ " ကျနော်တို့ကြေညာချက်၏အမှန်တရားဟာ negation ၏၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောစိတ္တဇ setting ကို၌ဤအယူအဆကိုဆနျးစစျပါလိမ့်မယ်။ ကြေညာချက် P ကိုမှန်သောအခါ, ကြေညာချက် "မ: P" မှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
P ကိုမှားယွင်းသောလျှင်အလားတူပင်၎င်း၏ negation "မ: P" မှန်သည်။ Negations လေ့ ~ တစ် tilde နှင့်အတူခေါ်လိုက်ပါမယ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အစား "မ: P" ရေးသားခြင်း၏ကျွန်တော်တို့ဟာ ~ P ကိုရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
စကားဝိုင်း, Contrapositive နှင့်ပြောင်းပြန်
ယခုငါတို့ပြောင်းလဲခြင်း, အ contrapositive နှင့်ခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ပြောင်းပြန်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခြေအနေအရကြေညာချက်နှင့်အတူစတင်ပါ ": P လျှင်မေး။ "
အဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏စကားဝိုင်းကို "ထို့နောက်မေး P ကိုပါ။ " ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ contrapositive " အကယ်. မဟုတ်ထို့နောက်မေးမရ: P" ဖွစျတယျ။
"ဒါဆိုမပေး P ကိုမရမေးလျှင်။ " ဟုအဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်တို့ကဤထုတ်ပြန်ချက်များကိုဥပမာတစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ "ဒါဟာနောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာလျှင်လမ်းဘေးစိုစွတ်သောဖြစ်၏။ " ကျနော်တို့ကခြွင်းချက်ကြေညာချက်နှင့်အတူစတင်ဆိုပါစို့
"ဟုအဆိုပါလမ်းဘေးစိုစွတ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်ကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်ရွာစေ။ " ဟုအဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ contrapositive "ဟုအဆိုပါလမ်းဘေးစိုစွတ်သောမကလျှင်, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာဘဲနေ၏။ " ဖြစ်ပါတယ်
"ဒါဟာထို့နောက်လမ်းဘေးစိုစွတ်သောမဟုတ်ပါ, နောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာမပြုခဲ့ပါ။ " ဟုအဆိုပါခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးတဦးတည်းအနေဖြင့်ထိုအကတခြားခြွင်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်များဖွဲ့စည်းရန်ဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့တွေးမိပေမည်။ အထက်ပါဥပမာမှာတစ်ဦးကသတိထားကြည့်တစ်ခုခုဖော်ပြသည်။ မူရင်းထုတ်ပြန်ချက်က "နောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာလျှင်လမ်းဘေးစိုစွတ်သောက" စစ်မှန်တဲ့ကြောင်းဆိုပါစို့။ အခြားထုတ်ပြန်ချက်များ၏ဘယ်ဟာအဖြစ်ကောင်းစွာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရသလော
ပြောင်းလဲခြင်း "ဟုအဆိုပါလမ်းဘေးစိုစွတ်သောဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အဲဒီနောက်နောက်ဆုံးညဥ့်ရွာစေ" သေချာပေါက်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါလမ်းဘေးနဲ့အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်စိုစွတ်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပြောင်းပြန်က "နောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာမပြုခဲ့ပါလျှင်, ထိုလမ်းဘေးစိုစွတ်သောမက" သေချာပေါက်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မလို့တနည်းကား, မိုဃ်းရွာလမ်းဘေးစိုစွတ်သောမဟုတျကွောငျးမဆိုလိုပါ။
အဆိုပါ contrapositive စစ်မှန်သောကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါလမ်းဘေးစိုစွတ်သောမကလျှင်, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်မိုးရွာရွာမ" ။
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ (နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်္ချာသက်သေပြနိုင်ပါသည်) ဒီဥပမာအနေဖြင့်ကြည့်ရှုနေတဲ့ conditional ကြေညာချက်သည်၎င်း၏ contrapositive ကဲ့သို့တူညီသောအမှန်တရားတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုထုတ်ပြန်ချက်များယုတ္တိနည်းအညီမျှဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းခြွင်းချက်ကြေညာချက်သည်၎င်း၏ပြောဆိုမှုများနှင့်ပြောင်းပြန်မှယုတ္တိနည်းအညီမျှမပေးကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။
တစ်ဦးခြွင်းချက်ကြေညာချက်နှင့်၎င်း၏ contrapositive ယုတ္တိနည်းအညီမျှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျနော်တို့သင်္ချာ theorems သက်သေပြကြသောအခါ, ငါတို့သည်ငါတို့၏အားသာချက်ဤသုံးနိုင်သည်။ အဲဒီအစားထက်ကျနော်တို့အစားကြောင်းကြေညာချက်ရဲ့ contrapositive ၏အမှန်တရားသက်သေများ၏သွယ်ဝိုက်အထောက်အထားနည်းဗျူဟာကိုသုံးနိုင်သည်, တိုက်ရိုက်ခြွင်းချက်ကြေညာချက်၏အမှန်တရားသက်သေပြ။ အဆိုပါ contrapositive, ယုတ္တိနှင့်ညီမျှကြောင့်မှန်လျှင်, မူရင်းခြွင်းချက်ကြေညာချက်ကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့ကြောင့် Contrapositive သက်သေအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒါဟာသော်လည်းထွက်လှည့် စကားပြောဆိုမှုနှင့်ပြောင်းပြန်ယုတ္တိနည်းအညီမျှမူရင်းခြွင်းချက်ကြေညာချက်မှမဟုတျပါ , သူတို့ကယုတ်တိအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ညီမျှကြသည်။ ဒီအတှကျလှယျကူရှင်းပြချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အခြေအနေအရကြေညာချက် " အကယ်. မေးပြီးတော့ P ကို" နဲ့စတင်ပါ။ အဆိုပါပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲခြင်း၏ contrapositive ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက "ထို့နောက်မဟုတ် P ကိုမရမေးလျှင်။ " ဒီကြေညာချက်၏ contrapositive ဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်ယုတ္တိနည်းအညီမျှကြသည်။
အဆိုပါ Cauchy ဖြန့်ဖြူးဆိုတာဘာလဲ
အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်ပေါင်းစည်းရေးများအတွက် LIPET မဟာဗျူဟာ
တစ်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးများ၏အများကိန်းများအမှတ် Find လုပ်နည်း
ကှဲလှဲနဲ့ Standard Deviation
အဆိုပါ Chi Square ကိုဖြန့်ဖြူးအများဆုံးနှင့်အများကိန်းများအမှတ်
အဆိုပါနံပါတ် Pi: 3,141592654 ...
Hernan Cortes '' Conquistador ကြည်းတပ်
အဆိုပါစပိန် Pharse '' SER De '
ပင်လယ်ကူးအခါလေတိုက်နှုန်း Read လုပ်နည်း
တစ်တောင်၏ Windward ဘေးထွက် vs. အဆိုပါ Leeward
သင့်ရဲ့ Samhain ယဇ်ပလ္လင် Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
အဘယ်သို့ငါကယ်လီဖိုးနီးယားဘားရှေ့နေများ '' စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာသလား?
အေးခဲ Tag ကိုဒရာမာအတန်းတိုးတက်မှုဂိမ်း
ထိပ်တန်း 10 '' 80s ပထဝီအမည်များနှင့်အတူ Acts
ဆယ်စုနှစ်အားဖြင့်ဂျက်ဇ်ဂီတ: 1920 - 1930
စီးပွားရေးကျောင်းမှလျှောက်ထားမှုအတွက် MBA ဘွဲ့ရ Waitlist မဟာဗျူဟာ
ကမ္ဘာ့ဖလား print ထုတ်လို့ရတဲ့၏နယူးခုနစ်အံ့ဖွယ်
ကြံစည်မှုအကျဉ်းချုပ် "တစ်နေထဲမှာစပျစ်သီးပျဉ်" နှင့်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
သင့်ရဲ့ကလေးများအတွက်ညာ Homeschooling သလဲ?
2008 Harley-Davidson FXDF DYNA ဆီဘော့